မန္တလေး အိမ်တော်ရာ ပေါက်ကွဲမှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မန္တလေး အိမ်တော်ရာ ပေါက်ကွဲမှု
မန္တလေး အိမ်တော်ရာ ပေါက်ကွဲမှု
Posted by ဂ်စ္စူ on Nov 22, 2010 in Myanma News, News | 13 comments
စစ်တပ် ကဘာတတ်တာလဲကွ၊ ခိုးတာ ဝှက်တာ အနိုင်ကျင့်တာ လူသတ်တာ မတရား လုပ်တာတွေ တတ်တာလား
ငါမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု နို ့ဆီပြုပ်စားရင်းနဲ ့နို ့ဆီဘုံးပေါက်သွားတာကွ
အဲ့သည်မှာရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ကြီးသေနေတာ မင်းအဖေဆိုရင် မင်းဒီလိုဘဲ စောက်ခွက်ပြောင်နိုင်ပါစေ
အားလုံးပြီးပြည့်စုံမှလူလူသူသူနေရာမှာ comment ပေးပါ။
ဗိုလ် ခြောက်ဆယ် တပ်သား လေးဆယ် နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပျက်နေတဲ့စစ်တပ်
လူတယောက်ထဲရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့စစ်တပ်
ပညာမတတ်တဲ့ လူ ဦးဆောင်တဲ့ စစ်တပ်
မင်း တို့ စစ်တပ်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ သန်းရွှေ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ကို ဂူးဂယ်လ် မှာရိုက်ရှာကြည့် ဘာတခုမှ ကောင်းတာမရှိ
ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ ခွဲခဲ့တဲ့စစ်တပ်
ရွှေဝါရောင်မှာ ဘုန်းကြီး သတ်တဲ့စစ်တပ်
နောင်တချိန်မှာ ရွှေတိဂုံ ဘုရားကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ့မခွဲဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ
မင်းတို့ထက် တတ်လို့ အုပ်ချုပ်နေတာလာမပြောနဲ့
ပြည်သူနဲ့လက်လက်ချင်း ချမယ်လို့ ကမ႓ာ မှာ လူသိရှင်ကြားကြေညာလိုက်
ကိုယ်ချင်းစာ ပြီးနာတတ်အောင် မင်းအဖေ၊အမေမသင်ပေးဖူးလား
ပထွေး ကိုပဲ သိပ်ချစ်နေတယ်ပေါ.
ဆီပုလင်းတို. Vaseline တို.ဆောင်ထားအုံး။
အို ငမောင်… ဆွမ်းဆန် ကြား ကြွက်ခြေးရောသလို မောင်ရင့်လုပ်ရပ်တွေက အမြဲတမ်းဖြစ်နေတော ့ဒီဆိုဒ်မှာဖတ်နေသူတွေက ပိဿာလေးနဲ ့ခွေးကိုပစ်သလို မောင်ရင်အမြဲတမ်းအပစ်ခံနေရတာ ငမောင်တစ်ယောက်သိသင့်တယ်ထင်ပြီနော.. မောင်ရင့်အရေးအသားကို ကြည့်ရတာလဲ ၄တန်း ၅တန်း နဲ ့ကျောင်းထွက်လာခဲ့ရမှန်းသိသာလိုက်တာ.. မောင်ရင့်ရဲ ့စာတွေ၊ စာဖတ်သူတွေရဲ ့Comment တွေကို မောင်ရင့်မိဘတွေကို တအောင့်လောက်ပေးဖတ်ခိုင်းလိုက်ပါလား.. မောင်ရင့်မိဘတွေ ငါ့သားက ဒီလောက်မိုက်ရိုင်းဆိုးပေနေပါလားလို ့သိကုန်ကြပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေကြလိမ့်မယ်.. မောင်ရင်ပြောတာ ဘာတဲ့ “စစ်တပ်(ပြည်သူ့ ့တပ်မတော်ဟုမသုံးချင်ပါ)က ဘုရားကျောင်းကန်မှာ ဗုံးမထောင်ဘူး” ဟုတ်စ….? တောင်ဥက္ကလာ ငွေကြာရုံကျောင်းတိုက်ထဲ ဝင်ပြီး ဘုန်းကြီးတွေကို ရိုက်သတ် ထိုးနှက် ကန်ကျောက်သွားတာ ဘယ်ကလာတဲ့ ခွေးတွေတုန်း… မြန်မာစစ်တပ်သာ စနစ်တကျနဲ ့စည်းကမ်းရှိမယ်ဆိုရင် တို ့တိုင်းပြည်ကြီး တိုးတက်နေတာကြာပါပြီပကော.. (စည်းကမ်းရှိမှ တိုးတက်မည်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းလေကွာ) .. အခုကြည့် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာ စနစ်တကျ မရှိလို ့တိုင်းပြည် မွဲပြာကျနေတာပေါ့..
konyeinchan ပြောတာ အမှန်တွေပဲ။
တိုင်းပြည့်ကျေးဇူးရှင် ဟုအရှက်မရှိ ပြောရဲတဲ့ အမောင်စစ်သည်…
ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို သနားတယ်ဗျာ… ခင်ဗျားအဆင့် က ဖိနပ်တိုက်တဲ့ အဆင့်နေမှာပါ…
နောက်ကို အခြေအနေကြည့်ပီးမှ ဟောင်ပါ… မဟုတ်ယင် ဝိုင်းဆော်တာခံရမှာပဲ… အမြင်မှန်ရစမ်းပါ…
ကျေးဇူးရှင်ကြီး အမောင်စစ်သည်ရေ- အခုဆိုရင် တိုင်းပြည်ကြီး ဖာတိုင်းပြည်ဖြစ်နေပြီမို့ အမောင်တို့ စစ်သည်တွေကို ကျေးဇူးတင်မိကြောင်းပါ။ ဟော-ကြည့်စမ်း ဒို့များရဲ့တိုင်းပြည်ကြီး ကမ်ဘာ့အလယ်မှာ ဝင့်ဝင့် ထည်ထည်နဲ့ သာယာစည်ပင်ဝပြောလို့နေပါပကော။ တိိုုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရအောင် အမောင်တို့စစ်သည်တွေက တိုက်ပေးခဲ့လို့ပါနော်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ပညာအစွမ်းနဲ့ ပြောလို့ဟုတ်ရပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဘယ်တုန်းကများ တိုက်ယူပြီး လွတ်လပ်ရေးရသွားခဲ့ပါလိမ့်။ အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။ ကျေးဇူးရှင်ကြီးအမောင်တို့တတွေကို တစ်တိုင်းပြည်လုံးက ချစ်ကြည်ညိုနေကြတာ။ ယမမင်းကြီးကတောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကို ကြောက်လို့တဲ့။ ခဏနေပါဦးတဲ့။ မလာပါနဲ့ဦးတဲ့။ သူကြောက်လို့ပါတဲ့။ ဒူးတွေတောင် တုန် နေပြီတဲ့။
ပွဲဆူနေပါတယ်အောက်မေ့တာ.. ခွေးရူးထဟောင်လို့ လူတွေလိုက်ရိုက်နေကြတာကိုး..
ခွေးရူး အမောင်စစ်သည်…. အရှက်မရှိ.. အရူးချီးပန်း.. လျှောက်မပြောလေနှင့်
သင့်ပထွေး စစ်တပ်တွေလုပ်နေတာ.. တိုင်းပြည်ဖွတ်ဖွတ်ကျေနေပီ…
တရုတ်ကိုအဖေခေါ် ကုလားကို ပါးပါးခေါ် သံဃာတော်တွေကို ရိုက်သတ်တဲ့စစ်တပ်ကိုမှ မင်းကအထင်ကြီးတယ်ဆိုရင်လည်း… မင်းစစ်ထဲဝင်လေကွာ.. ဒီမှာလာအော်မနေနဲ့.. တစ်ချိန်မှာစစ်အစိုးရပြုတ်မှာပဲ.. အဲ့ဒီတော့ မှ အဖေခေါ်စရာမရှိဖြစ်နေမယ်..
အမောင်စစ်သည်ဆိုတဲ့ ခွေးမသားရေ မင်းစောက်ရှက်ရှိမရှိတော့မသိဘူး ငါတို့ပြောရတဲ့ လူတွေတောင်ရှက်လာပြီ မင်းအဖေခွေးတွေ ကိုတော်တော်
ချစ်နေရင် ဖင်သာကုန်းခံလိုက်တော့…..ပြည်သူတွေကျွေးတဲ့ ထမင်းကိုစားပြီး
လူပါးဝနေတယ် လည်ပင်းကတက်နင်းရင် အတောင့်လိုက်ထွက်လာမယ် နားလည်လားခွေးမသား….